अपुग किटले फिटफिट
भारतबाट फर्केका सबैलाई पीसीआर टेस्ट गर्नुपर्ने भए पनि धेरैको आरडीटी पनि हुन सकेको छैन। जेठ १९ सम्म कैलालीको गौरीफन्टा नाकाबाट मात्रै ४४ हजारभन्दा बढी नेपाली भारतबाट देश फर्किएका छन्। उनीहरू सबैको कोरोना परीक्षण असम्भव देखिएको छ।
बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकामा चार जनामा कोरोना पुष्टि भयो। उनीहरू जेठ १० मा कैलालीको गौरीफन्टा नाकाबाट नेपाल भित्रिएका हुन्। उनीहरूसँगै चार सय जना अरू पनि भित्रिए। अहिले उनीहरूको खोजी गरेर न आरडीटी टेस्ट भएको छ, न पीसीआर नै।
संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा रहेका नागरिक अहिले जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका क्वारेन्टिनमा बसिरहेका छन्। कोरोना पुष्टि भएका व्यक्तिको सम्पर्कमा रहेकाहरूको टेस्ट नै गर्न नसकिएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख योगेशप्रसाद भट्टले बताए। उनले भने, ‘भीटीएमको अभावमा सबैको स्वाब संकलन गर्न सकिएको छैन।’
संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा रहेका नागरिकको थ्रोट स्वाब संकलन नहुँदा संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको स्वास्थ्यकर्मीले बताए। बैतडीमा भारतका कोरोना अतिप्रभावित क्षेत्रबाट आएका धेरै छन्।
सुदूरपश्चिमकै अर्को जिल्ला अछाममा पनि कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। एक जना अछाममै छन् भने दुई जनाको कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। तर, उनीहरूसँगै भारतबाट आएका व्यक्तिहरूको कोरोना जाँचसमेत हुन सकेको छैन।
टेस्ट किटको अभाव
सुदूरपश्चिममा जेठ १९ सम्म ७० हजारको हाराहारीमा नेपाली भारतबाट स्वदेश भित्रिएका छन्। तीमध्ये केही व्यक्ति सुदूरपश्चिम बाहिरका भए पनि ६० हजारभन्दा बढी सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लाका बासिन्दा हुन्।
भारतबाट फर्केका सबैलाई पीसीआर टेस्ट गर्नुपर्ने भए पनि अहिले धेरैको आरडीटी पनि हुन सकेको छैन। जेठ २, ३ र ७ गतेदेखि अहिलेसम्म कैलालीको गौरीफन्टा नाका दिनभरि खुला गरिएको छ। जेठ २ र ३ गते आएका नेपाली क्वारेन्टिनमा बसेको १४ दिनभन्दा बढी भइसकेको छ।
ती दुई दिनमा कैलालीको गौरीफन्टा नाकाबाट मात्रै ७ सय ५८ जना नेपाली स्वदेश भित्रिएका थिए। धेरै जिल्लाका उनीहरूको पनि आरडीटी र पीसीआर टेस्ट हुन सकेको छैन। जेठ १९ सम्म गौरीफन्टा नाकाबाट मात्रै ४४ हजार ४ सय ११ जना नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। त्यसबाहेक कञ्चनपुरको गड्डाचौकी, बैतडीको झुलाघाट र दार्चुलाको खलंगा (पुलघाट) नाकाबाट पनि हजारौँ नागरिक नेपाल भित्रिएका छन्।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको सोमबारको तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामा ४९ हजार ९ सय ५३ जना विभिन्न क्वारेन्टिनमा बसिरहेका छन्। तर, उनीहरूको संख्यात्मक तुलना गर्दा अहिलेसम्म आरडीटी किटकै अभाव देखिएको छ।
आइतबार संघीय सरकारले सुदूरपश्चिमका लागि २४ हजार आरडीटी किट पठाएको छ। सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयले हरेक जिल्लालाई २४ सय भाग पर्ने गरी आरडीटी किट वितरण पनि गरेको छ। ‘दैनिक छ हजारभन्दा बढी नेपाली भारतबाट फर्किरहेका छन्, अझ कति फर्किने हुन भन्ने यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन, २४ हजार किटले पुग्छ र ?’ सुदूरपश्चिमका स्वास्थ्य निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले भने।
आफूले सुदूरपश्चिमका लागि एक लाख आरडीटी किट माग गरेको उनले बताए। ‘भारतबाट फर्किने नेपालीको अहिलेको अनुपात हेर्ने हो भने एक लाखले पनि पुग्दैन,’ डा. अवस्थीले भने। आइतबार नै संघीय सरकारले पीसीआर टेस्टका लागि दुई हजार भीटीएम पठाएको थियो। भीटिएम भनेको व्यक्तिको नाक वा घाँटीको स्वाब संकलन गरेर प्रयोगशालासम्म पठाउने भाँडो हो।
‘दुई हजार भीटीएम आएका छन्, ४९ हजार व्यक्ति क्वारेन्टिनमा छन्,’ डा. अवस्थीले भने, ‘पीसीआर गरेर घर पठाउने त कल्पनै गर्न सकिँदैन, विश्वभरि सामग्री अभाव छ। तर, १४ दिनपछि होम क्वारेन्टिनमा पठाउन आरडीटी पनि अपुग भएका छन्।’
प्रयोगशालामा स्वाबको चाप
भारतबाट नेपाली नागरिक फर्केपछि धनगढीको पशुरोग अन्वेषण प्रयोगशालामा स्वाबको चाप बढेको छ। दैनिक बढीमा २ सय ५० नमुना परीक्षण गर्ने प्रयोगशालामा दैनिक छ सय जनाको स्वाब आइरहेको छ। केही स्थानीय तहले आफैँ पनि भीटीएम खरिद गरी स्वाब संकलन गरेर प्रयोगशालामा पठाइरहेका छन्।
तर, स्वास्थ्य निर्देशक डा. अवस्थीले यसरी भीटीएम खरिद गरेर स्वाब पठाए पनि परीक्षण गर्न नसकिने बताए। उनले मंगलबार छ सय नमुना परीक्षण क्यूमा रहेको बताए। ‘छ सय नमुना क्यूमा छन्,’ उनले भने, ‘अझ जिल्लातिर कन्टयाक्ट ट्रेसिङ भएकाहरूको संकलन भएर आउने क्रम जारी छ। त्यसैले पीसीआर मेसिन र जनशक्ति नथप्ने हो भने चाप धान्नै सकिन्न।’
केन्द्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले स्वचालित मेसिनको आवश्यकता परेको बताइरहेका बेला प्रदेशहरूमा पनि मेसिन र जनशक्ति नथपे परीक्षण चुनौतीपूर्ण हुने डा. अवस्थीले बताए।
डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाउँपालिकाले आफैँ भीटीएम खरिद गरेर क्वारेन्टिनमा रहेको पालिकावासीको स्वाब संकलन गरेर धनगढी पठाएको थियो। डा. अवस्थीले यसरी स्वाबको चाप बढ्ने र समयमा चेक भएन भने खेर जाने बताए। ‘हाम्रो चेक गर्ने क्षमता दैनिक तीन सिफ्ट चलायो भने दुई/अढाई सय हो,’ डा. अवस्थीले भने, ‘छ सय नमुना आयो भने पाँच दिनपछि त्यो नमुना परीक्षण गर्न मिल्दैन। सामग्रीको अभाव भइरहेका बेला अनावश्यक खर्च मात्रै हुन्छ।’ उनले संघ र प्रदेश सरकारले प्रदेशमा मेसिन र प्रयोगशालाको जनशक्ति थप्नुको विकल्प नरहेको बताए। सरकारले भारतबाट चार लाख र अन्य मुलुकबाट अझै १५ लाख नेपाली आउने अनुमान गरिरहेका बेला हालको प्रयोगशाला र जनशक्तिले नभ्याउने उनको भनाइ छ।
परीक्षण नहुँदै क्वारेन्टिनमै मृत्यु
घटना १ः बाजुरा जिल्ला अस्पतालमा कोरोनाका कारण आइतबार बिहान दुई वर्षकी बालिकाको ज्यान गयो। ती बालिक आमाबुबासँग भारतको मुम्बईबाट जेठ १३ मा गौरीफन्टा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेका थिए।
गौरीफन्टाको सीमानाका खुलेपछि जेठ १३ मा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी ५ हजार २ सय ४२ जना नेपाली स्वदेश फर्किएका थिए। उकुसमुकुस भएर आएको त्यो भीडमा रहेकी बालिकाका बुबा कोरोना नेगेटिभ र आमा पोजिटिभ देखिएकी छिन्।
भारतमा लकडाउनको अवधिभरि सुरक्षित बसेकाहरू पनि प्रचण्ड गर्मीमा यसरी हूल बाँधेर नेपाल प्रवेश गरेका थिए।
जेठ १४ गते बाजुरा पुगेर क्वारेन्टिनमा बसेका ती बालिका र आमालाई रातिदेखि ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने र पखाला चल्ने भएपछि उनीहरूलाई जिल्ला अस्पतालको आइसोलेसनमा सारिएको थियो। तर, बालिकाको भोलिपल्ट बिहान अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो।
घटना २ः डडेल्धुराको सदरमुकाममै रहेको डडेल्धुरा बहुमुखी क्याम्पसको क्वारेन्टिनमा राखिएका एक बालकको पनि शनिबार मृत्यु भयो। नवदुर्गा गाउँपालिका–३ का साढे छ वर्षीय बालकको क्वारेन्टिनमै मृत्यु भयो। नजिकै रहेको क्वारेन्टिनबाट अस्पताल नपु¥याउँदै उनको ज्यान गएको हो। उनी पनि आमाबाबुसँगै भारतको मुम्बईबाट डडेल्धुरा पुगेका थिए। उनको स्वाबको परीक्षण रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको छ।
घटना ३ः बैतडीमा क्वारेन्टिनमा बसेकी एक महिलाको मंगलबार मृत्यु भयो। पुर्चांैडी नगरपालिका–,४ भटनास्थित मालिका माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टिनमा बसेकी भटनाकै २२ वर्षीया सुनीता लुहारको मंगलबार बिहान मृत्यु भएको हो। मृतक लुहार मुटुरोगी रहेको भटना स्वास्थ्यचौकी इन्चार्ज रोहितकुमार धानुकले बताए। लुहारको अवस्था सामान्य रहे पनि मंगलबार बिहानै मृत्यु भएको उनले बताए। लुहार जेठ १६ गते गौरिफन्टा नाकाबाट स्वदेश फर्किएकी थिइन। उनका श्रीमान् र १८ महिने बच्चा जेठ १८ यता क्वारेन्टिनमा छन्।
लुहारको भारतको पञ्जाबबाट मुटुरोगको उपचार गराएर फर्किएको भए पनि आर्थिक अभावका कारण विगत १२ दिनदेखि औषधि सेवन नगरेको उनका श्रीमान् हरिश लुहारले बताए। मृतक लुहार र आफन्तको स्वाब संकलन गरिएको छ।
कष्टकर यात्रा गरेर घर आसपासको क्वारेन्टिनमा बसेका नेपाली बिरामी हुँदा उपचार नपाएर ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। प्रदेश सरकारका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले भने, ‘हामीले सीमानाकामै आरडीटी गरेर मात्रै नागरिक भिœयाऔँ भनेर प्रदेश सरकारलाई पटक–पटक भन्यौँ, तर कसैले सुनेनन्। कोरोना जाँच नभएर क्वारेन्टिनमै ज्यान जानु भनेको सरकारको कमजोरी हो।’